कृष्ण अभिषेकको अनुहार किन हेर्न चाहन्नन् गोविन्दाकी पत्नी सुनीता ? कपिल शर्मा शो मा खुलाइन् कारण – Kavrepati
Home / मनोरंजन / कृष्ण अभिषेकको अनुहार किन हेर्न चाहन्नन् गोविन्दाकी पत्नी सुनीता ? कपिल शर्मा शो मा खुलाइन् कारण
कृष्ण अभिषेकको अनुहार किन हेर्न चाहन्नन् गोविन्दाकी पत्नी सुनीता ? कपिल शर्मा शो मा खुलाइन् कारण
admin September 10, 2021	मनोरंजन Leaveacomment 68 Views
एजेन्सी । कृष्ण अभिषेक र उनका मामा गोविन्दा बिचको विवाद अझै साम्य भएको छैन । कृष्ण अभिषेक द कपिल शर्मा शो का कलाकार हुन् । जब पनि गोविन्दा कपिल शर्माको शो मा अतिथि को रूप मा आउँथे, कृष्ण शो बाट बिदा लिन्छन् । पछिल्लो समय पनि त्यस्तै भयो । गोबिन्दा आफ्नी पत्नी सुनीतासंगै कार्यक्रमा जाँदा कृष्ण शो मा थिएनन् । उनले बिदा लिएका थिए । सुनीताले यो पटक भान्जा कृष्ण प्रति निकै आ क्रो श ब्यक्त गरिन् ।
गोविन्दा भने आफ्ना भान्जाका बारो सार्वजनिक रुपमा बोल्न चाहन्नन् । तर उनकी श्रीमती सुनिता आहुजा भने आफुलाई रोक्न सकिनन् । उनले सिधै भनिन् म कृष्ण अभिषेकको अनुहार पनि हेर्न चाहन्न । एक मिडिया च्यानल संग एक विशेष कुराकानी मा, सुनिता आहूजा कृष्ण अभिषेकको बोल्दै यस्तो प्रतिकृया दिएकी हुन् । आफ्ना पती गोबिन्दालाई निकै चो ट पुर्याएका कारण आफुले उनको अनुहार हेर्न नचाहेको बताइन् ।
सुनिता आहुजाले भनिन्, ूकृष्ण अभिषेक हामी आउँदा कपिल शर्मा शो मा नभएकोमा म दुखी छु । उनी हामीसंग मञ्च साझा गर्न चाहन्नन् । यदि तपाइँलाई याद छ भने, गोविन्दाले आफ्नो बयान मा यो स्पष्ट पारेका थिए कि उनी निजी मामिलाहरु लाई जनताको सामु ल्याउने छैनन्। गोविन्दा आफ्नो वचनमा अडिग छन्। म दोहोर्याउन चाहन्छु कि हामी एक दूरी कायम राख्न चाहन्छौं। तर अब मामिला यस्तो हद सम्म पुगेको छ जहाँ यसको बारेमा कुरा गर्न आवश्यक छ।
प्रचारका लागी यस्ता कुरा भन्छन्
सुनिताले मिडिया च्यानलसँगको कुराकानीमा भनेकी थिइन् कि कृष्णले यो प्रचारको लागी गर्छन्। उनले भनीन् जब हामी शो मा आउँछौं, उनी (कृष्ण अभिषेक) प्रचार को खातिर हाम्रो बारेमा केहि न केहि भन्छन्। यो सब गरेर के फाइदा ? घरको व्यक्तिगत मामिलाहरुलाई जनता सामु ल्याउने के हो ? गोविन्दा चुप लागेका हुन सक्छन् तर अब म यी कुराहरुमा धेरै रिसाएको छु। उहाँ बिना पनि हाम्रो शो (द कपिल शर्मा शो( एक हिट छ। उनको हास्य प्रतिभा गोविन्दा को नाम सम्म मात्र सिमित छ ।
सुनिता आहुजाको रिस यसबाट शान्त भएन। उनले कृष्णको बारेमा थप कुरा गरिन् । उनले भनिन् उनको हास्य प्रतिभा केवल उनका मामाको नाम लिन मात्र सीमित छ। उहाँ सधैं किन मेरो मामा भन्छन् ? के उनीसंग मामाको नाम बिना हिट हुन को लागी पर्याप्त प्रतिभा छैन ?
मेरो जीवनमा कुनै मेलमिलाप हुनेछैन
कृष्ण, कश्मीरा र सुनीता, गोविन्दाका परिवारहरु बीचको विवाद यति धेरै बढेको छ कि जो अब अन्त्य हुने नाम लिएको छैन। सुनिता आहुजाले भनिन्, ु३ बर्ष अघि मैले भनेको थिएँ कि मेरो जीवनमा कुनै मेलमिलाप हुनेछैन। परिवारको नाममा, तपाइँ दु र्व्य व हार गर्न सक्नुहुन्न। यदि हामीले हाम्रो सासु ससुराको निधन पछि कृष्ण अभिषेकलाई घर छोडेर जाउ भनेको भए के हुन्थ्यो ? मैले नै उनीहरुलाई हुर्काए, आज उनीहरु नै मलाई दु ब्र्य व हार गर्दैछन् । म यति मात्र भन्न चाहन्छु कि विवाद कहिले अन्त्य हुनेछैन र म रहुन्जेल उनीहरुको अनुहार पनि हेर्न चाहन्न ।
कश्मीराको ट्वीटको कारण सम्बन्धमा दरार आएको थियो
वास्तवमा यो ३ बर्ष अगाडी को हो जब कश्मिरा शाहले एउटा ट्वीट गरेकी थिइन्, जसमा उनले ट्वीट गरेकी थिइन् ुकेहि मानिसहरु पैसाको लागी नाचिरहेका छन्ु। सुनिताले सोचेकी थिइन् कि यो ट्वीट उनको पति गोविन्दाको लागी हो। त्यसयता दुई परिवारबीच त ना व बढेको छ। जुन अहिले सम्म समाप्त हुने नाम लिएको छैन।
Previous सुत्केरी नुसरतलाई तपाईको छोराको बुवा को हो भन्दै जब पत्रकारले सोधे ? दिइन् यस्तो मुख बन्द हुने जवाफ
Next अनुदान स्वीकार गर्ने वा अस्वीकार गर्ने नेपाली जनताको छनोटको विषय हो: उपाध्यक्ष फतिमा सुमार [कुराकानी]